“မီးရေရှား………………………” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » “မီးရေရှား………………………”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 16, 2012 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 25 comments
ဒီမြို့ကြီးအနှစ်တစ်ရာတင်းတင်းပြည့်တဲ့နှစ်မှာ ကျုပ် ဒီမြို့ကြီးရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ သူလိုငါလို မထူးတဲ့သာမန်လူပါဘဲ။
ကျုပ်တို့မြို့က မင်းနေပြည်ဆိုတော့ ကျုံးတွေလဲရှိသပေါ့။
ကျုပ်တို့ခပ်ငယ်ကတော့ကျုံးပါတ်ပါတ်လည်မှာရှိတဲ့လမ်းအပြတိုင်း အပြတိုင်းမှာ အများပြည်သူသုံးဘို့
အဲဒီတုန်းက အခုလို မီတာရေတွေ ဘာတွေလဲရှိပါဘူး။
ဘာနဲ့မှ မနီးတဲ့လူတွေက အ၀ီစိရေသုံးပေါ့။
ဟိုးရှေးရှေးကလူဦးရေနည်းလို့လားတော့ မသိပါဘူး နွေတောင်မှရေအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ဒီမြို့သား မှန်ရင် တစ်နေ့နှစ်ခါတော့ ရေ၀၀ ချုိးနိုင်ပါတယ်။
မြစ်ရေကတော့ နီတီတီ နောက်ချင်ချင်ရှိတော့ ရေအိုးထဲကျောက်ချဉ်လေးထည့်ထားလိုက် သူ့ဖာသာသူ အနယ်ထိုင်သွားတာပါဘဲ။
ကျုပ်တို့လို ကျုံးရေသောက်လာတဲ့သူကတော့ကျန်တဲ့ရေ သောက်လို့အရသာမရှိဘူးထင်တာဘဲ။
ဘာတဲ့တစ်ခါ ဂျပန်ကဆိုလားဘာဆိုလား သုတေသနအဖွဲ့က မန်းလေးကျုံးရေကိုလာစမ်းသပ်ကြတာ။
ဒီကျုံးရေထဲမှာ ပိုးမွှားရှစ်ဆယ်ကျော် ရှိတယ်ဆိုလားဘဲ။
ပြောလိုက်ချင်ပေါင်ဗျာ ကျုပ်အဖွားအသက်ရှစ်ဆယ်ထိနေသွားတာ သူ့တစ်သက် ဒီကျုံးရေဘဲသောက်သွားတာ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက မန်းလေးမြို့နေရာတော်တော်များများက အိမ်တိုင်းမှာလျှပ်စစ်မီးမရှိပါဘူး။
ကျုပ်ငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့ 25လမ်းလမ်း80ကကြေးနန်းဝင်းထဲဆိုရင် ၀င်းထိပ်က ရဲမှူးကြီးအိမ်ရယ်
ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့ဝင်းသေးသေးလေးထဲမှာ အစိုးရပေးထားတဲ့ ဓါတ်တိုင် နှစ်တိုင်တောင်ရှိသဗျ။
ဘယ်တော့မှ မီးပျက်တယ်ဆိုတာမရှိ ညခြောက်နာရီကနေ့ မနက်ခြောက်နာရီထိလင်းထိန်ဝင်းလက်လို့။
ကျုပ်ငယ်ငယ်က ရှစ်တန်းထိ အဲဒီဓါတ်မီးတိုင်အောက် စာထိုင်ကျက်ရင်း စာမေးပွဲတွေအောင်လာခဲ့တာပါဘဲ။.
ကျုံးဘေးက ပေတစ်ရာထိပ်ထွက်လိုက်ရင် လမ်းမတန်းတွေဆိုရင် မာကျူရီမီးတွေမှ ထိန်လို့၊
ဆောင်းတွင်းဆို ဒီမာကျုရီမီးတိုင်အောက်မှ ပုရစ်တွေထွက်ကောက်ကြတာပေါ့။
ညများဆိုရင်ကျုံးဘေးက ထွက်ကြည့်လိုက်ရင် မြောက်ဘက်က မန်းလေးတောင်ပေါ်မှာလဲ မီးတွေလင်းထိန်လို့။
လမ်းကြားတွေမှာတော့ ဘတ်သီး ၀ါကျင်ကျင် တစ်ရာအားလေးတွေတွေထွန်းပေးထားတာပေါ့။
နောက်အလွန်ဆုံးသုံးမှ ရေဒီယိုလောက် ကက်ဆက်လောက်ဖွင့်ကြတာ။
အကျီလုံချည်မီးပူတိုက် ရင်လဲ………………… လျှပ်စစ်နဲ့ဘဲ။
အ၀တ်လျှော် ရင်လဲ………………… လျှပ်စစ်နဲ့ဘဲ။
ထမင်းဟင်းချက် ရင်လဲ………………… လျှပ်စစ်နဲ့ဘဲ။
တီဗွီ အောက်စက်ဖွင့် ရင်လဲ………………… လျှပ်စစ်နဲ့ဘဲ။
အင်တာနက် တို့ စလောင်းတို့ဆိုရင်လဲ ……………လျပ်စစ်နဲ့ဘဲ။
အေးအောင်လုပ်ချင် ရင်လဲ………………… လျှပ်စစ်နဲ့ဘဲ။
အဲတော့ လဲ လျှပ်စစ်ဆိုတာ အလိုအပ်ဆုံးထဲမှာ မရှိမဖြစ်ထိပ်ဆုံးပေါ့။
လျှပ်စစ်ထုတ်တာ တိုးမတိုးတော့ မသိဘူး သုံးတာကတော့အဆပေါင်းများစွာတိုးလာပါတယ်။
နောက်တော့ ရေအားလျှစ်စစ်စီမံကိန်းတွေတခုပြီးတစ်ခုသတင်းစာထဲမှာရော ရုပ်မြင်သံကြားမှာရော
တစ်ခုအသစ်ဖွင့်ရင် မင်းသမီးမင်းသားအသစ်တွေ အဲဒီပေါ်တက်ပြီး တစ်ခါကကြတာပါဘဲ။
လျှစ်စစ်ထုတ်လုပ်တာသာ တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးလာတယ်သာပြောတယ် မီးက ပျက်ပြီးရင်းပျက်ရင်းပါဘဲ၊
အလှည့်ကျစနစ်ခွဲတမ်းစနစ်ဆိုပေမယ့် လာချိန်မှာ မလာဘဲပျက်ချိန်ကျတော့ အတိအကျပျက်တတ်တဲ့
မီးတွေပျက်တော့ အင်ဗာတာတဲ့ ဆူညံပွက်တဲ့မီးစက်ဆိုတာကအလုပ်တွေဖြစ်ပြန်ရော။
ဟောအဲတော့ အဲဒီမီးစက်တွေသုံးဘို့ ဓါတ်ဆီဆိုတာက လိုလာပြန်ရော။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ မီးမှန်ပြိး ဆက်တိုက်ရလာတာပါဘဲံ။
အဲဒီတန်းကများ နေ့ရောညပါ မီးလာတော့ အင်ဗာတာတွေမီးစက်တွေ မသုံးရဘဲ မိူတောင်တက်နေပါတယ်။
နောင်တော့ လဲ ဒုံရင်းပြန်ဖြစ်လို့ လာလိုက်ပျက်လိုက် ပျက်လိုက်လာလိုက်သံသရာထဲပြန်မျောသွားတာပါဘဲ.။
သိပ်မကြာသေးခင်ကတော့ မြစ်ဆုံရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်းဂယက် အတော်လေးထလိုက်ပါရဲ့။
ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတာ မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ကုန်အောင်မသုံးနိုင်လို့ အပြင်မှာရောင်းစားနေရတယ်ဆိုဘဲ။
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က အဲဒိအကြောင်းဖတ်နေရင်းမီးပျက်သွားလို့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆက်ဖတ်ရတာပါဘဲ။
ထားပါတော့ ဒါတွေက ပြီးသွားပြီလို့။
မနှစ်က မိုးတွင်းရော ဆောင်းတွင်းပါ မီးအတော်လေးမှန်နေလို့ ဟုတ်ပြီ ဆိုစိတ်ချမ်းသာ နေတာ ဒီနှစ်
မီးလာတဲ့အခါ မီးအားကမပြည့် အ၀င်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်ဘဲရှိပြန်တော့လာခဲ့
မီးအားမြှုင့်စက် ဆိုတဲ့ ထရန်စဖော်မာမပါရင် မီးသုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
ကျုပ်စိတ်ထဲတွေးမိတာ 110 နဲ့ 220များမှားပြီးလွှတ်နေသလားပေါ့နော်။
အဲဒါကို မီးဝင်အောင် ထရန်စဖော်မာကို တင်ထားတော့ ဘယ်ဘက်က ခလုပ်တောင် ညာဘက်အဆုံးရောက်တဲ့ထိတင်ရပါတယ်။
အဲလိုတင်ထားပြိး အပြင်ထွက်တာ တို ည အိပ်ပျော်သွားတာတို့နဲ့ကြုံတော့
မီးအား220ကျော်ရင်ပြုတ်ရမယ့် ခလုတ်က မပြုတ်တော့ မီးထလောင်ရောပေါ့ဗျာ။
ကော်ဖီမစ်များလို သရီးအင်ဝမ်း သုံးရက်လာ တစ်ရက်ပျက်မယ်ပြောလားပြောရဲ့.။
ခက်တာက မီးမလာရင် ရေလဲမလာတော့ဘူး။
ကျုပ်တို့နေတဲ့ ကန်တော်ကြီးက စည်ပင်တိုက်ခန်းတွေက စည်ပင်ရေကိုသုံးရပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ထဲကို အ၀ီစိတွင်းတူးပြီး 35လမ်းမြတောင်ကျောင်းနားက ရေတွန်းစက်ကနေကျုပ်တို့ဘက်
2000ခုနှစ်ကျုပ်ဒီတိုက်ခန်းရောက်စက ဘယ်အချိန်ဖွင့်ဖွင့် ပိုက်က ရေကျတာပါဘဲ။
နေရကောင်းမှန်းမသိလို့  ထင်ပါရဲ့ နေတဲ့သူ နည်းပါသေးတယ်။
အစက ကျုပ်တို့နေတဲ့အောက်ထပ်က မော်တာမလိုဘူး။
မနက်ခြောက်နာရီဆိုရေလာ နေ့လည်တစ်နာရီတစ်ခေါက်လာ နောက်ညနေလေးနာရီတစ်ခေါက်လာ။
နောက်ပိုင်းတော့ ည သန်းခေါင်သန်းနွဲမှ ရေလာတော့တယ်။
လာပြန်တော့လဲ ကလေးသေးပေါက်သလောက် နည်းနည်းလေး။
အဲဒိတုံးက မော်တာမပါလဲ ရေ နည်းနည်းချင်း လာတာကိုစောင့်ခံလို့ရသေးတယ်။
နောက်တော့ အပေါ်ထပ်ကလူတွေက မော်တာမတပ်ရင်ရေမရတော့ အခန်းတိုင်းမော်တာတပ်ရော.။
ကျုပ်တို့လဲ ရေမရတော့ဘူးဖြစ်တော့ သူများနည်းတူမော်တာတပ်ရတော့တာပေါ့။
သူတို့စည်းကမ်းတွေမှာ မော်တာမတပ်ရဘူးတော့ပြောသံကြားဘူးပေမယ့် မတတ်ရင်ရေမရတော့
အဲတော့ မီးမလာရင် မော်တာမလည် မော်တာမလည်တော့ ရေမရတော့ဘူးပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ရက်က မနက်တစ်ခါ နေ့လည်တစ်ခါ ညတစ်ခါရေလာတော့ အဟုတ်မှတ်နေတာ
အဲဒါတောင်ရေတွန်းစက်ရှိတဲ့ 35လမ်းမှာ မီးမပျက်မှရေတွန်းလို့ရတာ။
အဲဒီနေရာ မီးပျက်ချိန်နဲ့ရေတွန်းချိန်ကြုံရင် ရေမပေးတော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုရက်မှာတော့ ဘယ်အိမ်မှရေ ရလိုက်တာမရှိဘူး။
ကျုပ်တို့အောက်ထပ်ကတော့ မော်တာနဲ့ဆွဲရင် ရေတစ်စက်ခြင်းကျလာပါတယ်။
အဲဒါလေးကို ခွက်နဲ့ခပ် ကျန်တဲ့အိုးတွေထဲထည့်ပေါ့။
အဲလို့နဲ့ သုံးစရာရေရှိအောင် လုံ့လစိုက်ရတော့တာပါဘဲ။
ခက်တာက မီးအားက မငြိမ်ဘူး။
အဲတော့ မီးအားကတက်လိုက်ကျလိုက်ဆိုတော့ ထရန်စဖော်မာက ပြုတ်ပြုတ်ကျသွားတော့ မော်တာကမလည်တော့ဘူး။
အိမ်မှာရှိတဲ့ ဇလုံတွေ အိုးတွေ ခွက်တွေထဲ လိုက်ဖြည့်။
ကျုပ်မိန်းမက ထရန်စဖော်မာနားမှာ ခုံတစ်လုံးနဲ့ထိုင်။
ကျသွားရင် ချက်ခြင်းလက်နဲ့လှည့်ပြီး ပြန်တင်လို့
ညဆယ်တစ်နာရီလောက် ရေလာချိန်က စလိုက်ရင် မနက်2နာရီလောက်ပြီးပါတယ်။
မီးစက်ရှိတဲ့အိမ်ကတော့ မီးစက်တွေနိုးပြီး ဆက်ဆွဲကြတာပေါ့။
မီးစက်မရှိတဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ မီးပြန်လာမလား ထိုင်စောင့်ရင်ငုတ်တုတ်မိုးလင်းခဲ့ရပါလေရော။
ဒါပေမယ့် အဲဒီညက ဘယ်သူမှရေ မရလိုက်ပါဘူး။
ရေက တစ်စက်မှကျမလာတော့ ရေတွန်းစက်ကို လှမ်းပြီး ဖုန်းတွေနဲ့မေးတော့
သူတို့ဆီမှာလဲ မီးပျက်နေတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ ကောင်းရော။
အရင်ကတော့ ထမင်းဟင်းချက်တာ တော့ မီတာရေ။
အခုရက် လာတဲ့မီတာရေက တစ်ခါတစ်လေ သံဂျီးရေ ခပ်နောက်နောက်။
အဲတော့ စဉ့်အိုးထဲ ကိုကျောက်ချဉ်ခပ် အပေါ်ယံကြည်တာလေးသုံး။
ထမင်းဟင်းချက်တာရယ်သောက်တာရယ် က ရေသန့်နဲ့ပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ မနေ့ညနေက ထမင်းချက်ခါနီးမှ ရေသန့်ကုန်နေလို့ အိမ်နားက စတိုးဆိုင်သွားဝယ်ပါတယ်။
သူတို့လဲရေသန့်ပြတ်နေလို့ဆိုတော့ ရေသန့် မရခဲ့ဘူး။
အဲဒါနဲ့ဘဲ ရေသန့်ဘူးလေးတွေနဲ့ခွဲထည့်ထားတာကိုပြန်သွန်ပြီး ထမင်းချက်ရတော့တာပေါ့။
လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီဲးမပြောနိုင်တော့သလို ပြောလဲ မပြောရဲတော့ပါဘူး။
သိပ်ဲထွေထွေထူးထူးတော့ မမေးချင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဖြေနိုင်သူများရှိရင် ဒါလေးတွေတော့ မေးကြည့်ချင်သားရယ်။
ကုန်အောင်မသုံးနိုင်ဘူးလို့ကြားခဲ့ရတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားတွေက အခုဘယ်ရောက်ကုန်လဲ ?
(မသိဘဲပွားတာလား မရှိဘဲကြွားတာလား )
ရေပေးရေးဌာနမှာရော မီးပျက်ရင် မီးစက်မောင်းပြီး ရေတင်မပေးနိုင်ဘူးလား?
ကျုပ်ငယ်ငယ်ကတဲက ဘယ်မှမပြောင်းဘဲနေခဲ့တဲ့မြို့။
ကျုံးမြိုရိုး နန်းတော် ရှေးက ပကတိအတိုင်းကျန်ခဲ့တဲ့မြို့။
(မီးရေရှားမြို့လို့ နာမယ်လှလှလေးပေးခဲ့သော အမည်မသိတဲ့အမကြီးကိုကျေးဇူးတင်လျှက်)
ဆိုင်ရာဝံဂျီးတွေ ဘာဒွေလုပ်နေကြသတုန်း မသိပါဘူး
ပိုလို့ ရောင်းသတဲ့..လိုလို့ ပြန်ဝယ်သတဲ့..
ကိုယ်သယံဇာတနဲ့ ကိုယ် ရောင်းလိုက် ၀ယ်လိုက်နဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာဘဲဗျာ..
သူရို့လက်တည့်စမ်းတာ ပြဿနာမရှိဘူး..သူရို့ က မီးတို့ ရေတို့ ကို ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် မြေအောက်က သွယ်ထားပြီးသား
ရလာတဲ့ဆိုးပြစ်ကို အူးလေးတို့တားတို့ လူတွေပဲ ခံရတာ..
ဘယ်လိုပြောပြော… မြန်မာပြည်ဟာ (အင်မတန်)ဆင်းရဲပါတယ်…နော..။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ဖို့.. အရင်းအမြစ်တွေပဲရှိတာပါ..။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ဖို့.. ဖြန့်ဝေဖို့.. ပစ္စည်းတွေ..အင်ဖရာစရပ်ချာတွေဆောက်ဖို့.. ငွေမရှိပါဘူး..
နည်းပညာတတ်တဲ့သူတွေ မရှိပါဘူး.. ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားရှာ(ရှား)ပါတယ်..။
ဒါကြောင့်.. အရင်းအမြစ်တွေရောင်းပြီး.. ရလာတဲ့ငွေကနေ.. ကိုယ့်အရင်းအမြစ်ကထုတ်တဲ့.. လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တချို့ပြန်ဝယ်ရတာပေါ့..
မြေကြီးထဲက.. ကျောက်မျက်ရတနာတွေ.. သယံဇာတတွေ.. နှစ်ရှည်စိုက်မွေးရတဲ့..သစ်ပင်တွေကနေရတဲ့ငွေကနေ… စွမ်းအင်အတွက်ငွေသုံးလုပ်ကြမှာထက်စာရင်.. မြစ်ရေစီးဆင်းနေမှုကို.. လက်ညိုးထိုးရောင်း.. ပင်လယ်ကမ်းလွန်က.. (သူများလည်းလှမ်းဆွဲလို့ရတဲ့..) ဓါတ်ငွေ့သိုက်ကဓါတ်ငွေထိုးရောင်း… လေလမ်းကြောင်းသင့်ပေမဲ့.. ကိုယ့်နိုင်ငံလူထုအနည်းငယ်လောက် ထိခိုက်မဲ့.. လေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေတဲ့.. ကျောက်မီးသွေးဈွ်းအင်ထုတ်စက်ရုံမျိုး.. မသိမသာ..ကြပ်ပေးရင်း.. ဈေးကောင်းရအောင်လုပ်ပြီး.. အထူးလုပ်ခွင့်နဲ့ခွင့်ပြု.. အဲဒီလုပ်ကွက်တွေကထွက်လာတဲ့..ငွေတချို့.. တိုင်းပြည်အင်ဖရာစရပ်ချာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်.. တချို့.. လျှပ်စစ်ပြန်ဝယ်.. စသဖြင့်လုပ်ရင်း.. လူထုအခြေခံ basic wants and needs ကိုဖြည့်ရမှာ ဦးစားပေးပေါ့..
အခုတော့.. ယူအက်စ်ရဲ့..ဂျီရိုနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်မိပြီး.. လည်သွားကြတာမှ.. မွှတ်လို့..
မနက်မနက်ဆို ၈၅ ထောင့်က ရေကန်မှာ ရေချိုးနေတဲ့သူတွေအများကြီး
ညဘက်တွေလဲ ပူလွန်းလို့ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေများနေပြီ တော်ရေ
ဓာတ်လိုက်ပြီးသေမဲ့ လျှပ်စစ်ဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေ
အခုလိုပူတဲ့အချိန်ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့ လမ်းဘေးကတွင်းမှာ လူတွေပြည့်နေလို့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေတောင် သွားစရာနေရာမရှိဘူး
ရေ…ခလုပ်ဖွင့် ရေရ သူတို့မှ
သွား ဝေး ဝေး သွား…
လေးပေါက်ရေ မီးရေရှားမြို့ကို လာလည်မယ်နော် ဖယောင်တိုင်အဆင်သင့်ထွန်းထားပေးပါ ရေကိုလည်း ဒီးဒုတ်ကနေဖရဲမကိုခပ်ခိုင်းထားပေးပါ ……..(၃) ယောက်စာနော် ……. ခြင်ကလည်း အတော်ကိုက်တယ်နော် မန်းလေးမြို့ ခြင်ထောင်နား ကိုလက်မထိရဲ့ဘူး အငြိုးနဲ့ထိုင်စောင့်နေတဲ့ အကြွေးရှင်တွေကျနေတာပဲ ………
ကောင်မ ဖရဲ …….. ဟိုတယ်မှာ ဒီလောက်ဈေးကြီးတာ နင့်အိမ်မှာလာနေမယ် ….. မကျေနပ် ကျုံးဘေးသွားတောင်းနေအေ ….ဘီ ……စီ ………..ဒါဖြဲ
မတတ်နိုင်ရင် နာပိုက်ဆံစိုက်ပြီး ဟိုတယ်ဌားခပေးပါမယ်ကွယ်
ကောင်မဖရဲရေ …… နာလေ သူများပို့စ်မှာ ရန်မဖြစ်ချင်ဘူးအေ …. လေးပေါက်ရေ အားတော့ နာပါတယ် ….. ရန်ဆက်ဖြစ်လိုက်ဦးမယ်နော် ……….တောင်မရေ နင့်ရဲ့ဇီးထုပ်ဖိုးလောက်ရတဲ့ မုန့်ဖိုးပိုက်ဆံကို ဟိုတယ်ငှားရအောင် ညည်းပိုက်ဆံပြည့်ဖို့ စောင့်နေရင် နာကဘယ်တော့မှ ရေမီးရှားမြို့ကို လာရမလဲအေ ……….. အဟိ အဟိ အဟိ လာထား (၁၀) …….
မီးရှား ရေရှား လို့ များ အဲဒီမြို့ကို မီးရေရှားမြို့လို့ ပြောင်းခွင့်ရရင်
မီးရေရှား-၁ ၊မီးရေရှား-၂ ၊မီးရေရှား-၃……………………….မီးရေရှား-၃၂၅ ဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်း
ဒီနာမယ်လေးက မနေ့က အသိတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောရင်းသူပေးသွားတဲ့နာမယ်လေးကြိုက်လို့
တိုင်းပြည်ကိုပါ မီးရေရှား တိုင်းပြည်လို့ ပြောင်းလိုက်ရင် ပိုလှသွားမလားလို့ပါ ။
ဒီဘက်ကမ်းက မီးမှိန်မှိန်၊ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ အိမ်။
အဲဒီလို ” သာဓုပါဗျာ ” သင်္ကြန်သံချပ်အဖွဲ့ က ဆိုသွားတာပဲ။
မာမီအခု (မပြည့်မှန်းသိရက်နဲ့) ဆုတောင်းချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်။
မီးမှန်မှန်လေးလာပါ။ အိမ်ရှေ့ ကမြောင်းရေစီးပါစေ။ ဒီ နှစ်ခုထဲပါ။
ကိုခိုင်ပြောတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်လေးဖြစ်လည်း ပျော်အောင်နေပါ့မယ်။
ကွန်းချမ်း | သောကြာနေ့၊ မေလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၁ မိနစ်
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ စတင် လည်ပတ်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် ကော့သောင်းမြို့ရှိ ကျောက်မီးသွေး လောင်စာသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံကို ရပ်တန့်ပေးရန်အတွက် ကြာသပတေးနေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ ဒေသခံများက အသနားခံစာ ရေးသားပို့ပေးခဲ့သည်။
ကော့သောင်းမြို့ရှိ ရပ်ကွက် ၁ဝ ရပ်ကွက်အနက် ၉ ရပ်ကွက်မှ ဒေသခံ ၆၃ ဦးက လက်မှတ်ထိုးကာ သမ္မတကြီးထံ လက်မှတ် ရေးထိုးပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
| တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၁၆ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၀ မိနစ်
ဓာတ်ပုံသတင်း – မြနှယ်စိမ်းစိမ်း (အင်းစိန်)
ရခိုင်က တရုတ်ဓာတ်​ငွေ့​ပိုက်လိုင်း​ရပ်ရန် ကမ္ဘာတလွှား​တောင်း​ဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က​နေ တရုတ်နိုင်ငံထဲကို သွယ်တန်း​ဖောက်လုပ်​နေတဲ့​ ​ရေနံနဲ့​သဘာဝ ဓာတ်​ငွေ့​ ပိုက်လိုင်း​ စီမံကိန်း​ကို ဆိုင်း​ငံ့​ထား​ဖို့​ အဖွဲ့​အစည်း​ ၁၃၀ ​လောက်က မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ​တောင်း​ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ​တောင်း​ဆိုတဲ့​ အဖွဲ့​တွေထဲမှာ နိုင်ငံ​ပေါင်း​ ၂၀ က လူအခွင့်​အ​ရေး​အဖွဲ့​တွေနဲ့​ သဘာဝပတ် ဝန်း​ကျင် ထိန်း​သိမ်း​ရေး​အဖွဲ့​တွေ ပါဝင်ပြီး​ ဒီသမ္မတဦး​သိန်း​စိန်က ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံ​ရေ ကာတာကိုဆိုင်း​ငံ့​သလို ဒီဓာတ်​ငွေ့​ပိုက်လိုင်း​ စီမံကိန်း​ကိုလည်း​ ရပ်နား​ဖို့​ လှုပ်ရှား​တာလို့​ ဦး​ဆောင်သူ ကိုဝင်းအောင်က ​ပြောပါတယ်။
တိုကျို မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒပြ
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 28 ရက် 2011 ခုနှစ် မောင်ရမ္မာ သတင်း – နိရဉ္စရာ သတင်းဌာန
အင်အား ၁၀၀ ကျော်ခန့်ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံ သားများသည် နိုဝင်္ဘာလ ၂၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က တိုကျိုမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေု့သို့ သွားရောက်ကာ ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ရန်တောင်း ဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
Stop-China-Trans-Burma-Oil-And-Gas-Pipelineဆန္ဒပြပွဲကို ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ပြည်ပ- ဂျပန်ဌာနခွဲ)မှ ဦးဆောင် စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ကို ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအရ ရပ်ဆိုင်း
ပြည်သူလူထု အကြား စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဝေဖန်မှု များ ထွက်ပေါ်နေသည့် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို ပြည်သူလူထု ၏ဆန္ဒ အရရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော်နှင့်အမျိုးသားလွှတ် တော်သို့ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ များအရသိရသည်။
ယင်းသ၀ဏ်လွှာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်နှစ် (၃၀)လျှပ် စစ်မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းအရ နောက်ထပ်ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း(၆၄)ခုနှင့် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ (၃)ခုအပါအ၀င် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန်စက် တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် လေးသောင်း ကျော်ထုတ်လုပ်နိုင် သည့် အလားအလာ များရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ စီမံကိန်းများ တွင် ကချင်ပြည်နယ် ရှိ မေခ၊ မလိခမြစ်ညာမြစ်ဝှမ်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ရှစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း ပါ ရှိသည်။
ကိုယ့်အမြင်ပြောချင်နေတာ သဂျီးနောက်က ဖော်လို လိုက်မှပဲ။
ဒီမိုကရေစီမှာ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် တောင်းဆိုနေကြတာ….
ကိုယ်လိုချင်တာပဲ သိပြီး မိဘက တတ်နိုင်၏ မတတ်နိုင်၏ အခြေအနေကို မသိတဲ့ ကလေးလိုများ ဖြစ်နေသလားလို့………..
ကိုယ်တိုင်လည်း မီးရေရှားဒုက္ခကို လက်တွေ့ခံစားနေရပါကြောင်းးးးးးးးးးးးး
တခြားဟာ ထားလို့ …
မီးအခြေအနေကြည့်ပြီး တပ်ခေါက်သွားတဲ့ အင်ဗက်စတာတွေကို အများကြီး
ပိုဆိုးတာက သူတို့က ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်မှာ…
ဒီလို တောတောင်ကအထပ်ထပ်၊ ပြည်နယ်တွေက အသီးသီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးကမထိရောက်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက လုံးလုံးမကောင်းသေးတဲ့ နိုင်ငံမှာ မဟာဓါတ်အားလိုင်းစံနစ်ကို အမှီပြုနေရတာကိုက အမှားကြီးတခုပါ။
ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ လျှပ်စစ်ကို ဒေသလိုက်ထုတ်သုံးဖို့ ဇောင်းပေးကြိုးစားရမှာ..။
ကို အားထားနေရသမျှ ခံနေရအုံးမှာသာ ဖြစ်ပါဂျောင်း..
ကိုပေါက်ရေ မီးကမလာရေကပျက် တော်တော် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ
အရင် က တရုပ်ကားတွေထဲမှာ သစ်သားစည်ကြီးထဲဝင်ပြီးရေချိုးတာမြင်ရင် ညစ်ပတ်တယ်ဆိုပြိး
အခုတော့ ကိုယ်လဲ အဲလိုစည်ပိုင်းထဲဝင်ရေချိုးရတော့မယ်။
အဲတော့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် နဲ့ဘရိတ်ကီ သီချင်းထဲက မီးနဲ့ရေ ကို သတိရမိပါကြောင်း။
နဖူးမှာ ဂျုံဖတ်လေး ကပ်ပြီး ဂေဇက် ရဲ့ ပေါက်ချိန် လုပ်ဗျာ ။
မနက် အလုပ်လာရင်းက 35လမ်းနဲ့85လမ်းဒေါင့်ကရေကန်မှာ လူတွေအများကြီးဘဲရေချုိးနေတာတွေ့တော့
ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်တော့ မိန်းခလေးတွေပါရေချုိုးနေတာတွေ့တော့
ဖရဲမရေ အဲဒီဓါတ်ပုံက နင်ရိုက်ရမှာလေ။
မောင်ပေ အချွန်နဲ့ မနေပြီနော်။
ဒီပိုစ်လေးက (6-6-2012)နေ့ထုတ် မန်းလေးအခြေစိုက်မြနန္ဒာ ဂျာနယ် အမှတ်(20)မှာ ပုံနှိပ်ပြီးပါကြောင်း